अझै केही समय बित्दा देशमा केही परिवर्तन भयो र जमिन जोत्नेको पनि जमिनमा भाग आउने कानुन बन्यो । सन्त बहादुरको जीवन झनै आशावादी बन्यो । समयको प्रवाहसँगै 'जोत-को-पोत' भन्ने कानुन र भूमिमा द्वैत स्वामित्वको अन्त गर्ने नियम बनेपछि भने उसको जीवनको तस्विर नै बदलियो ।
सुनिन्छ, केही समय अगाडि उसले आफ्नो मोहियानी बापत आएको २ रोपनी जग्गा करौडौंमा बेचेको छ । आजकल ऊ डेराको घर छाडी आफ्नै जमिनमा बनेको सुन्दर घरमा बस्छ । घर मुनिको सटरमा उसको आफ्नै किराना पसल छ । उसका छोरा-छोरीहरू पनि कोही कलेज पढ्छन् त कोही काममा लागिसके । बिहान बेलुकी सन्त आफ्नो पसलमा आफैँ बस्छ र गाउँलेहरू उसलाई 'सन्त साउ' भनेर बोलाउँछन् । अँ त, भनिरहनु नपर्ला उसका शिक्षित छोराछोरीहरू उसलाई आजकल ‘ड्याडी’ भनेर बोलाउने गर्छन् ।
Jotare Dhaiba 30/10/11 5:30 PM
Paresh 30/10/11 5:38 PM
Palpali Milan 30/10/11 5:50 PM
Anonymous 30/10/11 6:47 PM
Ashesh 30/10/11 7:07 PM
एकछिन त अन्तो न पत्तो सँग हराएँ । म त ड्याडी भनेको फेरि अर्कि ल्याएर होला भन्ने ठानेको ....तर कुरो अर्कै रहेछ....अनुमानै गर्न नसकिने....गज्जवको लेखनी!!!!
Ekendra 30/10/11 9:52 PM
प्रकाश समीर 2/11/11 1:54 PM
Ramesh 7/11/11 11:01 PM
दूर्जेय चेतना 23/12/11 3:29 AM
के भएको छ दिलिप सर मेरो कमेन्ट प्रकाशित हुदैन नि किन हो? हाहाहा माईसन्सार जस्तै छान्न थाल्नु भाको त हैन नि हाहाहाह।
गजबकै कथा छ यो पनि। त्यस्ता सन्त बहादुरहरु त कति कत आजकल है...
Dilip Acharya 23/12/11 1:43 PM
दूर्जेय जी, म कमेन्ट डिलिट गर्दिन ...त्यसमा पनि तपाईँको ???? मेरो त्यत्रो हिम्मत !!। मैले त तपाईँको सबै कमेन्ट देखिएकै ठान्छु...कुनै पोस्टको कमेन्ट नआएको भए कृपया खबर गर्नु होला (कहिलेकाहीँ सिस्टममा गडबड भएर तुरुन्तै कमेन्ट नदेखिन भने सक्छ है ।)।
कमेन्टको लागि सबैमा धन्यावाद !
Binaya Karki 16/8/13 12:40 PM
हा हा मैले जे सोचेर पढेको तेही रैछ। राम्रो छ सर